Xildhibaan C/weli Qanyare: Weerar shirqool ah ayaa leygu soo qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare oo xalay ciidamada Nabadsugiddu weer ku qaadeen gurigiisa ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day-dil.
Xildhibaanka oo saaka la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay inuu la yaabay kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya soo weerareen gurigiisa.
Dhageyso Xildhibaan C/weli Qamyare
“Weerar qaawan oo ku talagala ah oo anigoo xildhibaan qaran ah leygu shirqoolayo ayuu ahaa, qofka habeen madow gurigaaga u socda isagoo aan kusoo wargelin sharcigu wuxuu qabaa inaad iska difaacdo” ayuu yiri Xildhibaan C/weli.
Xildhibaan C/weli ayaa ka hadlay dilka sarkaalkii watay ciidamada Nabadsugidda oo dagaalka ku dhintay, wuxuuna sheegay in sarkaalkaas oo lagu magacaabi jiray Caydiid Cabdi ay dileen ciidamadii uu watay.
“Ninka taliyaha ciidankii uu watay ayaa gadaal kazoo xabadeeyey, mana hubo laakiin waa sida la leeyahay, aniga ilaaladeyda waxaa ka dhaawacmay labo” ayuu sidoo kale yiri xildhibaankaas oo intaa ku daray “Shabaab miyaan iska ilaalinaa mise ciidanka dowladda”.
Wuxuu sheegay C/weli Qanyare in saraakiil isaga lasoo hadlay ay u sheegeen in sababta loo soo weeraray tahay inuu gurigiisa joogay nin la raadinayey, isagoo xusay inuusan ninkaas oo lagu sheegay Cabdi Nuure Siyaad (Cabdi Waal) uusan joogtin gurigiisa.
“Markaan weydiiyey sababta leysu soo weeraray waxey yiraahdeen nin la raadinayey ayaa gurigaaga ku jiray, mana jirin halkaas, nin ku jiray, dadkii marasta ahaa ayay argagax iiga rideen, waxeyna u egtahay in sharciga lagu tumanaayo” ayuu sidoo kale yiri C/weli Qanyare.
Ciidamada Nabadsuiggada ayaa xalay weeraray guriga xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare, waxaana halkaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, iyadoo arrintaas aysan ka hadlain dowladda Soomaaliya.